Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano | Fiaretana haran-dranomasina
Mba hahafantarana raha misy fiatraikany amin'ny tontolo iainana manokana na mandoto ny loharano sy ny halehiben'ny olana ny fahalotoan'ny rano maloto dia zava-dehibe ny hametrahan'ny mpitantana ny fari-pitsipika sy hananganana programa fanaraha-maso. Na ireo tetik'asa bitika kely indrindra aza dia mahazo tombony amin'ny fandaminana am-pitandremana hamantarana ny olana, mamaritra ny fomba mazava sy ny dingana azo antoka amin'ny kalitao ary ny fandinihana ny drafitry ny angona sy ny fifandraisana.
Ny dingana lehibe amin'ny programa kalitaon'ny rano dia:
Farito ny olana. Inona avy ireo fiantraikany amin'ny rano maloto mety ho fantatrao? Inona ny angona efa misy, toy ny fampahalalana manokana momba ny tranokala momba ny fotodrafitrasa rano maloto?
Manaova fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano kendrena amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fizotrany izay mampiditra ny fidiran'ny manam-pahaizana raha mety (ohatra, izay toerana hanaraha-maso, inona ireo tondro tokony hifantohana, ary ahoana no hanangonana data)
Mamolavola sy mampihatra fianarana mandroso hanampiana ireo loharanom-pahalotoana
Fakafakao sy fintino ny data ho an'ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombon'antoka, mpanapa-kevitra, ary ny mpiara-miombon'antoka manan-danja hafa, ary tadidio izay angona angona ho an'ny mpihaino anao
Ampiasao ny fampahalalana hitarihana ny fizotran'ny drafitra na ny hetsika fitantanana.
Misoratra anarana amin'ny laharam-pahamehana sy maimaim-poana misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandotoana an-tserasera momba ny fandotoana rano maloto hianaranao bebe kokoa momba ireo dingana lehibe ireo.
Mba hahitana ny fanovana ny kalitaon'ny rano mifandraika amin'ny rano maloto, tokony hieritreritra ny mpitantana ny haran-dranomasina fa handrefitra ireto tondro ireto:
Ny Nitrogen sy ny phosforus, ny otrikaina ilaina amin'ny zavamaniry sy ny biby, dia famantarana mahazatra ny otrikaina. Ny loharanon'ny azota dia misy ny famoahana ny rano maloto, ny rano avy amin'ny ahitra sy ny tanimboly, ny cesspools ary ny rafitra septika tsy mahomby, ny rano avy amin'ny zezika sy ny toerana fitahirizana biby ary ny fivoahan'ny indostria izay misy mpanakana ny loto. Ny refy iraisan'ny azota sy ny phôlyôra dia ahitana: Nitrogen total (karazana nitrôro sy organika tsy mitambatra, levona sy zezika hita ao anaty santionany), amoniaka, nitrates, nitrites, ary Total phosforus (ny fôpôly rehetra).
Farany, ny silika dia fepetra simika manan-danja izay sonian'ny rano ambanin'ny tany. Ny silika avo dia manondro loharano loharano. Matetika ny silicate dia refesina amin'ny laboratoara miaraka amin'ny nitrate sy phosphate. Ireo tondro ireo dia azo refesina amin'ny autoanalyzer na laboratoara ho an'ny ~ $ 50 USD / santionany.
Ny fahamasinana dia azo refesina amin'ny alàlan'ny refraktera, ary ny mari-pana amin'ny sensor azo entina. Ny salinity dia mety ilaina indrindra rehefa mamantatra tranonkala ho an'ny fanaraha-maso maharitra.
Dissolved Oxygen (DO) dia masontsivana lehibe iray amin'ny fanombanana ny kalitaon'ny rano noho ny fiantraikany amin'ny zavamananaina an-dranomasina.
Ny ambany DO dia afaka manondro fitoplankton na bakteria be loatra izay mihinana oxygen. Ny DO dia refesina amin'ny alàlan'ny metatra kalitao marobe mifangaro amin'ny rano - na sonde - (mitentina ~ $ 1,000- $ 15,000 USD).
Ny Turbidity - fitsapana lehibe iray momba ny hazavan'ny rano izay mety hisy fiatraikany amin'ny fitoplankton - dia matetika no tombanana amin'ny alàlan'ny kapila Secchi handrefesana ny halalin'ny halalin'ny masoandro.
Ny fomba nomerika nomerika hafa, toy ny metatra fitondran-tena sy ny metatra fikorontanana dia manatsara ny fahaizana manangona angona amin'ny tena ora fa mila fikojakojana sy fikajiana.
Bakteria famantarana fecal (FIB) avy amin'ny fako olombelona toy ny E. coli, Enterococcus, na C. manitra azo ampiasaina hamantarana rano maloto. Fitsapana tsotra tany an-tsaha no novolavolaina mba hitsapana ny FIB amin'ny rano. Ohatra iray ao amin'ny tranga any ambanivohitra Tanzania izay nisy fitsapana hidrôzenina hidrôzôma ho an'ny tokantrano 433, ahafahan'izy ireo manara-maso ny loharanon-dranony manokana ary misafidy tsara momba ny fiarovana ny rano sy ny fitsaboana. Mampalahelo ho an'ireo mpitantana an-dranomasina, any amin'ny faritra amoron-tsiraka ny hakitroky ny bakteria dia ambany loatra noho ireo karazana fitsapana any an-tsaha ireo ary ilaina ny famakafakana ny laboratoara hahafantarana azy ireo.
Safidy iray hafa ny fanangonana santionana amin'ny rano sy fanaovana fanandramana FIB amin'ny alàlan'ny laboratoara zanabolana (~ $ 3,000 USD) na laboratoara nentim-paharazana sy fomba kolontsaina, toy ny test Enterolert (IDEXX) ampiasain'ny Surfrider amin'ny vidiny $ 11 USD isaky ny santionany.
famaitso a no pigment photosynthetic maintso lehibe hita amin'ny zavamaniry rehetra ao anatin'izany ny ahidrano fitoplanktonika ary proxy ho an'ny mpamokatra voalohany planktonika. Ny fifantohan'ny klorofila a amin'ny ranomasina haran-dranomasina dia famantarana ny habetsahan'ny sy biomassan'ny fitoplankton, izay loharano mivantana na tsy mivantana ho an'ny ankamaroan'ny biby an-dranomasina. Klorofila ambany a ny haavon'ny rano dia tsara. Na izany aza, ny fikirizany maharitra amin'ny haavony avo lenta no olana, ka chlorophyll a tokony harahi-maso farafahakeliny isam-bolana mba hamaritana ny fiovan'ny vanim-potoana biomass fitoplankton. famaitso a azo refesina amin'ny filtration sy laboratoara ary raha alefa any amin'ny laboratoara dia mitentina ~ $ 20 USD / santionany.
Ireo data ireo dia afaka mamantatra ireo lamina sy fanovana lehibe raha angonina mandritra ny taona maro. Afaka mampiasa an'io fampahalalana io ireo mpitantana mba hanombohana hifandray amin'ny lamina ara-pahasalamana haran-dranomasina sy ny isan-jaton'ny haran-dranomasina. Ireo mari-pamantarana ireo dia somary mahomby ihany. Misy fitsapana an-tsaha maromaro izay azo tanterahina amin'ny kitapo azo entina na fitaovana mora vidy (<$ 1000 USD). Ireo fitsapana an-tsaha ireo dia mitaky santionan'ny rano kely ary manome valiny ao anatin'ny minitra vitsy. Ho an'ireo mpitantana manana fotoana na teti-bola voafetra hanolo-tena amin'ny programa fanaraha-maso dia ireo no fomba voalohany azo ampiasaina. Ny manager dia mety handinika hoe inona ny fetran'ny detection amin'ireto fomba ireto ary raha mifanaraka amin'ny faritra misy azy ireo. Ohatra, amin'ny ranomasina madio, mety ho sarotra ny maka klôlôlôma famantarana na mampiasa kapila Secchi.
Fomba fitsaboana / fitaovana
Klorofila a Metera klorofila
DO (oksizenina levona) Fatra fandrefesana na calorimeter
Solosaina voafafa tanteraka (TDS) na Turbidity Kapila Secchi, metatra fikorontanana, na sensor
Zava-dehibe ny fanekena ireo famantarana ireo fa tsy midika mivantana ny fahalotoan'ny rano maloto satria misy loharano na anton-javatra hafa afaka mandray anjara amin'ny ambaratonga novaina. Ohatra, ny otrikaina dia mety avy amin'ny fambolena na fampandrosoana ary ny bakteria mpanondro fecal dia mety koa avy amin'ny biby na tany.
Soritry ny loharanom-pahalotoana
Ny famaritana ny fisian'ny rano maloto any amin'ny ranomasina dia sarotra ary miankina amin'ny fitsapana maro hamantarana ireo loto isan-karazany fahita any amin'ny rano maloto. Ny fanandramana be pitsiny kokoa izay mandrefy isotopônôzôma sy loto izay misy loharanon'olombelona toa ny fanafody sy ny fako voa-organika, toy ny metabolite detergent na additives amin'ny sakafo, dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny rano maloto sy ny loharano (s). Misoratra anarana ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandotoana an-tserasera momba ny fandotoana rano maloto raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fampiasana karazan-tsiranoka simika isan-karazany mba hahafantarana bebe kokoa hoe avy aiza ny otrikaina be.
Ireo fitsapana ireo dia afaka manome fandrefesana voafaritra kokoa sy hamantarana ireo loto maloto matetika mifandraika amin'ny rano maloto nefa matetika lafo ny mihazakazaka satria mitaky fidirana amin'ireo milina manampahaizana manokana sy lafo vidy izy ireo.
kafeinina Fanatanjahantena masobe
DNA Fitsapana laboratoara (eDNA qPCR na fanamafisana ny fluorescent)
Pharmaceuticals ELISA, bioassay
Mpanakorontana endocrine (oh: estrogen) Spectrometry marobe, bioassay (fipoahan'ny kolontsaina trondro na tavy)
Bakteria (E. coli, E. faecalis, C. perfringens) Famaritana Quantification amin'ny isa heterotrofika, microarray, na qPCR
metaly Fanatanjahantena masobe
Nitrogen isotopes Fanatanjahantena masobe
Sterol Fanatanjahantena masobe
Sucralose Fanatanjahantena masobe
Ny santionan'ny rano dia alaina any an-tsaha ary matetika dia mitaky volabe izay tsy maintsy mifantoka amin'ny fanatanterahana ny famakafakana. Raha tsy eo akaiky ny laboratoara dia azo alefa ny santionany, fa ny mari-pana, ny fotoana ary ny vidiny dia ferana avokoa. Soso-kevitra ny hiasan'ny mpitantana amin'ny famoronana fiaraha-miasa na fiaraha-miombon'antoka amin'ny oniversite eo an-toerana, izay matetika faly amin'ny mpianatra miasa amin'ny olan'ny tena fiainana, ary afaka manampy amin'ny fandefasana ny vidin'ny fandalinana santionany sy ny fandalinana data miaraka amin'ny famatsiam-bola. Ny famantarana ny kalitaon'ny rano tsirairay dia manampy amin'ny fahazoantsika ny hevitry ny loto ao anaty rano. Ny paikady fanaraha-maso sy famakafakana izay manangona ny refy isan'ny tondro marobe, ampiarahina amin'ny fanaovana sarintany ireo toerana avoaka, dia afaka mamaritra tsara ireo karazana sy loharanon'ny loto maloto.
Zahao ny fizarana Resources ho an'ny antsipirihany bebe kokoa momba ny fomba fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano ho an'ireo mpitsabo.
Kalitaon'ny rano tsy dia tsara any amin'ny morontsirak'i Maui. Sary © Bill Rathfon ho an'ny Hui O Ka Wai Ola (Association Of The Living Waters), fiaraha-miasa amin'ny The Nature Conservancy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHui O Ka Wai Ola
Hui O Ka Wai Ola dia programa fanandramana momba ny kalitaon'ny rano siantifika mifanaraka amin'ny fenitry ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana, sampana sy rano madio an'ny sampana madio. Ny santionany sy angona nangonina dia ampiasaina amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fenitra momba ny kalitaon'ny rano sy ny drafitra fitantanana. Ny santionany voaangona eny an-tsaha dia entina any amin'ny laboratoara any amin'ny lisea any an-toerana natokana ho an'ny fomba fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano. Ny angona avy amin'ny ezaky ny santionany eny an-tsaha dia atambatra ho tahiry fanohanana mitohy izay ampiasaina amin'ny famakafakana, hanarahana ny hetsika fandotoana, ary hahafantarana ny fivoaran'ny kalitaon'ny rano sy ny haran-dranomasina rehefa mandeha ny fotoana.
Ity programa ity dia manaiky ny fetran'ny fanondroana kalitaon'ny rano. Ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny rano tsirairay dia manampy amin'ny fahatakarana, saingy tsy misy refy tokana mifarana ampy. Noho izany, paikady izay manangona ny fandrefesana ireo mari-pamantarana marobe dia sarobidy kokoa. ref Zava-dehibe indrindra izany noho ny tsy fisian'ny fifanarahana manerantany momba ny tokonam-pandotoana. Ohatra, ny enterococcus no refesina matetika bakteria mpanondro fecal (FIB) amin'ny tontolo an-dranomasina ampiasaina hamaritana ny fanidiana ny torapasika sy ny mpanolo-tsaina. Saingy, bakteria iray hafa hita tao anaty loto, Mpanosotra Clostridium, dia heverina ho mariky ny fandotoana ny loto maloto any Hawaii saingy tsy ekena hampiasaina manerana ny firenena. ref Ny tsy fahampian'ny fahatakarana mirindra ny faharetan'ny ranomasina amin'ny fandotoana maloto, satria misy fiantraikany amin'ny fahasalamana an-dranomasina sy ny olombelona izany dia mitaky fametrahana vodin-tany ifotony sy fanaraha-maso ny ezaka ho an'ny fiarovana mahomby. Raha mila fanazavana fanampiny momba ity programa ity dia jereo ny webinar momba ny Hui O Ka Wai Ola.
Loharano sy fitaovana ho an'ny programa fanaraha-maso
Ny sary an-tsary sy ny maodely, ny fahatsapana lavitra, ary ny ezaka amin'ny sary an-tsary dia manampy amin'ny ezaka fanaraha-maso ny fandotoana rano maloto ary manampy amin'ny fampahalalana ny hetsika fitantanana. Ireo maodely noforonina tamin'ny fampiasana angona eto an-toerana dia afaka maminavina ny kalitaon'ny rano.
Fitaovana hafa manangona tahirin-kevitra manerantany momba ny voninkazo algoma, ny zava-mitranga amin'ny famaohana ny haran-dranomasina, ny fiovan'ny velaran'ny ranomasina ary ny mety ho eutrofication, izay misy fampiharana sy ilaina eo an-toerana. IRETO misokatra amin'ny varavarankely vaovaoangon-drakitra misy azo ampiarahina amin'ny angona geografika eo an-toerana, toy ny toerana misy ny toeram-pitsaboana rano maloto, hahafantarana ireo loharanon'ny loto. Ireo mpitantana dia afaka manambatra ireo angona ireo ihany koa amin'ny fitsapana any an-tsaha sy any amin'ny laboratoara hahafantarana ireo fepetra fototra, manao laharam-pahamehana ireo fanadinana fanaraha-maso, ary mamantatra ireo banga data mba hamaritana tsara kokoa ny fiovan'ny kalitaon'ny rano rehefa mandeha ny fotoana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSitrano ny karatra Tatitry ny Bay of NowCast, modely haminany ny kalitaon'ny rano amoron-dranomasina any California, Etazonia, ary hanatsara ny fahafantaran'ny besinimaro ny trangan-javatra mandoto.
Points Tipping Ocean manolotra fepetra tsy tambo isaina momba ny kalitaon'ny rano (toy ny haavon'ny azota sy ny phôlyôra) miaraka amin'ny toetran'ny haran-dranomasina hita ao amin'ny sari-tany misy fifandraisana. Ity fitaovana ity dia manome tahiry ho an'ny nosy Hawaii ary manohana ny hetsika fitantanana mba hiarovana ny tontolo iainana haran-dranomasina. Izy io koa dia misy sosona mahavelona izay noforonina tamin'ny fampiasana ny maodely InVEST NDR, izay mijery betsaka amin'ny loharano azota sy fôforôra.
Index ny fahasalamana an-dranomasina manolotra isa momba ny fahasalamana amin'ny ranomasina manerantany mifototra amin'ny fandrahonana sy faharetana. Ny angon-drakitra manokana momba ny fahalotoan'ny rano maloto any an-dranomasina dia eo am-pivoarana ary ho ilaina amin'ny famakafakana data sy ny tombana ny fiantraikan'ny fandotoana rano maloto.
Allen Coral Atlas mampiasa sary an-tsary zanabolana avo lenta sy an-tsehatra mandroso hametrahana sarintany ireo haran-dranomasina manerantany amin'ny antsipiriany mbola tsy nisy toa azy. Ireo vokatra ireo dia manohana ny siansa, fitantanana, fiarovana ary fiarovana ny haran-dranomasina manerana ny planeta. (Ireo vokatra hafanan'ny ranomasina NOAA Coral Reef Watch dia tafiditra ao amin'ny Atlas.)
Fandrefesana ny saha momba ny kalitaon'ny rano ataon'ny mpahay siansa olom-pirenena Hui O Ka Wai Ola. Sary © Bill Rathfon
Mbola misy filàna fandrefesana sy fanaovana tatitra mahomby sy mahomby amin'ny famaritana ny fahalotoan'ny loto. ny misokatra amin'ny varavarankely vaovao Index ny fahasalamana an-dranomasina dia tetik'asa iray nataon'ny NCEAS izay manolotra isa ara-pahasalamana any an-dranomasina miorina amin'ny fandrahonana sy faharetana. Ny angona angon-drakitra manokana momba ny fahalotoan'ny tatatra any amin'ny ranomasina dia eo am-pivoarana ary ho ilaina amin'ny famakafakana data sy ny fanombanana ny scalar momba ny fiantraikan'ny fahalotoan'ny loto.
Mamoaka maloto effluent. Sary © Matthew Chatfield </
US Coral Reef Task Force Watershed Partnership Initiative Priority Ecosystem famantaranamanokatra fisie PDF
Fomba hanarahana ny loharanom-pahalalana hahafantarana sy hamantarana ireo loharanon'ny rano maloto any amin'ny ranon'i Hawaii (USGS 2020)